यसरी सताउँछ उ मलाई हरेक रात-Brtnepal.com
Loading... यसरी सताउँछ उ मलाई हरेक रात
Published on August 4, 2016 at 2:06 pm
फेरी उसको फेसबुकमा नयाँ स्ट्याटस देखें, “जीन्दगी मलाई भारी भएको हो की जिन्दगीलाई म भारी भएको हो” ।
उ आजकल बहुलाह जस्तो भएको छ, प्रेम र जीन्दगीमाथि उसले लेख्ने स्ट्याटसले मलाई पनि घरीघरी बहुलाह बनाउँछ । के लेखुँ कमेण्टमा ? उ बिरक्तीएको बेला म रमाईलो मानेर लाईक गरु ?,लाईक गर्नुको अर्थ कि त ठिक लेख्यौ भन्नु हो, कि त कती सुन्दर शब्दशैली भनेर प्रशंशा गर्नु हो या त आफुुसंग ति शब्दहरुको तालमेल मिल्नु हो मेरो बुझाईमा । त्यसमाथी उ किन यस्तो लेख्दैछ भनेर थाहा भएको मान्छेले बेपर्वाह लाईक सिम्बोलमा क्लीक गरिदिंदा उ खुषि हुँदैन भन्ने बुझेकी छु ।
कमेण्टबक्समा अरुले झैं सम्झाउन पनि सक्दीन म । के सम्झाउनु बहुलाएको मान्छेलाई?, जाँड र चरेसले होष गुमाएको मान्छेलाई त्यसका अबगुण सम्झाउन खोजे जस्तो । उ त सम्झाउन लेखीएका कमेन्टहरु राम्रोसंग पनि पढ्दैन होला । त्यसको बदलामा “जीन्दगी भारी भएको भए आत्महत्या गर” भनेर लेखिदियो भने उ खुशि हुन्छ । अप्ठ्यारो छ उ साह्रै ।
उ सधैं मलाई भन्छ, “तिमी मात्र छौ मलाई बुझ्ने” ।
म उसको यो वाक्यले कैलेहि खुशि हुन सक्दीन । ठुलो पीर थोपरिन्छ मेरो मुटुमाथी उसले भलाई भन्दै आएको यो वाक्यले । म जस्तै बुझिदिने अर्को केटी किन आएन उसको जीन्दगीमा ? उ जति अप्ठ्यारो भएपनि मैले बुझ्न सक्ने सबै भन्दा सजिलो मान्छे हो उ ।
प्रत्यक भेटमा उ २ वटा कुरा दोहोर्याइ रहन्छ एउटा– “तिमी मात्र हौ मलाई बुझ्ने” र अर्को “म कसै संगको भेटमा आफु बोल्दीन र अरुको मात्र सुन्छु भने त्यो तिमी हौ” । यो ८ बर्षमा मैले यो कुरा करीव ८ सय चोटी नै सुनिसकें हुँला । सुनेर म उसको अगाडी खिस्स हाँसे पनि उ संग छुटेपछि मलाई यो वाक्यले कयौं रात निदाउन दिएको छैन ।
जीवनका भोगाईहरुमा उसले आफुभन्दा मलाई भाग्यमानी ठान्दो हो । भेटहरुमा उ मलाई हेर्दै भन्छ, “आजकाल तिमी खुशि देखिन्छेउ” । उसको प्रत्यक वाक्य भित्र अर्थ हुन्छन्, उसका ओठ होईन मन चल्छन् म संग हुँदा । उ बुझ््छ सायद– मेरा आँखा भनिरहेका हुन्छन,् “म ठिक हुनलाई तिमी पुर्णरुपमा ठिक हुनुपर्छ,” म खुशि हुने दिन तिमी कहिले ल्याउँछौं हँ ?
उसका शान्त वाक्य फेरी प्रश्न बनेर उभिन्छन् मेरो सामु “साँच्चै तिमी अहिले खुषी छौ नि है” ? झुट बोलुँ या सत्य ? खुशि छु भनुं भने उसको मनमा धेरै कुरा खेल्छन,् छैन खुशि भनुं भने खुशि भौ तिमी खुशि हुनुपर्छ भन्दीन्छ ।
साह्रै सुन्दर छ उ हेर्नमा । म उसलाई जीस्काउँछु कहिले काहिँ कती राम्रो छौ यार तिमी । हाँसेरै भन्दा जीस्काए जस्तै लागेपनि उसको अग्लो कदमा सुहाएको शरिरको बनौट, घुम्रीउको लामो कपाल, कहिल्यै नछुट्ने उसका थरीथरीका चस्मा, बेपर्वाह लगाइृएका लुगाहरुमा पनि सुन्दर देखिने अवर्णनिय छवि छ उसमा । उसका निधार, नाक, ओठ र मुस्कान प्रत्यक युवतीको मनमा सर्लक्क पस्ने कुराहरु हुन् । साँच्चै उसले कोरको, उसले सबैभन्दा सुन्दर मानेको चित्र भन्दा कयौ गुणा सुन्दर छ उ ।
कुन ठाउँ र साथीहरु होलान् उसले मेरो नाम नलिएको र सायदै मेरा पनि कमै होलान् उसको नाम नसुन्ने ब्यक्ती । कसैसंग मेरो बारेमा खुलेरै प्रसंसा गर्दो हो उ, कसंसग कुनै प्रसंगमा मिलाएर जोड्दो हो मेरो नाम । जे होस् उ मलाई कुनै माहौलमा भुल्दैन । साँच्चै मेरा पनि कयौं सपना छन् उ संग जोडीएका । एउटा ठुलो सपना कुनै समुन्द्री किनारमा जुन उदाएको रात संगै चुरोट पीउँदै “लगजा गले के फिर य हँसी रात हो ना हो” गीत गाउने ।
मलाई सबै भन्दा मिठो पल त्यति बेला लाग्छ मुस्कुराउँदै मेरो छेउमा आफ्ना कविता सुनाउन बस्छ । मेरो ध्यान त्यो बेला उसका कवितामा भन्दा उसको अधरमा फुलेको मुस्कानमा हुन्छ । कबिता सक्कीएर “कस्तो छ ” ? भन्दै चन्चल नजर म तिर फ्याक्दा म धेरै चोटी अल्मलिएको छु । हाम्रा लागि यी पलहरु जुर्न पनि महिनौं लाग्छ ।
मै एउटा हुँ जसलाई उ भुलें भनेर पनि भुल्न सक्दैन, खुशिहरु संग थाकेर थलापरिरहेको अवस्थामा भएपनि उ मेरो घुर्कीहरुमा फकाउँछ सकिनसकी । म रिसाएं भनें उ माफी माग्छ । मेरो जवाफ नपाएपछि उ फेसबुकमा लामो स्ट्याटस हाल्छ पढेर म खुशि हुन्छु । के लाग्छ कुन्नी मलाई उसले यसरी स्पस्टीकरण दिएपछि ? मैले जीतें उसले हार्यो जस्तो, उसले दुखाएको चित्त उसैले बुझाउनु पर्ने अडानमा बस्छु म यस्तो बेला । यस्तो जीद्धी उसले नि गर्छ कहिलेकाहिँ । अनौंठो आदतमा अल्झेका छौं हामी । कति मीठो गरी भन्छ उ, “यस्तै छौ तिमी मैले नजानेरै गरेको गल्तीको माफी माग्न बिज्ञप्ती नै निकाल्नु पर्छ नत्र तिमीलाई हुँदैन” ।
केही समय पहिले सम्म मेरा गालिहरु सुन्न उ आफुले गरेका गल्तीहरु फोन गरेर सुनाथ्यो , तर आजकल धेरै भयो उसले आफ्ना गल्तीहरु नसुनाएको र मैले नकराएको । यसरी गल्ती नसुनाउँदा मलाई लाग्छ अव उ सुध्रियो होला । हुनत बिग्रेकै कहिले छ र उ । उ आफ्ना पीर भुल्न र केहि पल रमाउन कहिलेकाहिँ रक्सी पीउँछ, रक्सी पिउनु, चुरोट सल्काउँदै आधा रातमा घर फर्कर्नुलाई गल्ती भनिन्छ र ? मलाई उसले रक्सी र चुरोट पीउँदा रिस कैलेहि उठ्दैन अर्को पीर थपिन्छ किन यस्तो बैरागी भएर भौतारिएको छ यो केटा ।
परिवारको पढेलेखेको एउटा छोरो, जसमा आम युवकका भन्दा कयौंै माथिका सोच र खुबि छन् तर कहिल्यै उ यसलाई सहि ठाउँमा प्रयोग गरेर नाम र पैसा कमाउन चाहंदैन । हाम्र्रा आत्मीय झगडा यी नै कुरामा पर्छन कहिले काहिँ । उ त सधै उस्तै छ झगडा के गर्थो । बरु म रिसाउन थालेपछि “हुन्छ म तिमीले भनेझै गर्छु” भनेर मेरो किचकिचबाट बाहिर आउन खोज्छ ।
म प्रत्यक फोन, म्यासेज र भेटहरुमा रुखो भएर कराईरहेको हुन्छु । उ मेरा गालिहरु मुस्कुराएर सुनिरहन्छ, कुनै बेला सुनेको गौतम बुद्धको कथा जस्तै । साच्चै बुद्ध जस्तै लाग्छ मलाई त्यति बेला उ ।
उ म संग न गुनासो गर्छ न भन्छ, उ के कुराले दुखी हुन्छ र कुन कुराले खुशि । खै कसरी हो म आफैं थाहा पाउँछु । उसका कविता जव फेसबुकको वालमा पोष्ट हुन्छन्, सबैका आ–आफ््नै तरिका हुन्छन् कमेन्टस्का । तर म लाईक गर्न सम्म डराउँछु । मलाई ति कविताबाट थाहा हुन्छ, उ यतिबेला कुन हालतमा छ, मन हुन्छ उसलाई कमेन्टबक्सकै भनिदिउ,ँ “तिम्रो यो अवस्थाले म निदाउन सक्दीन, हाँस्न सक्दिीन” तर कमेन्ट त के लाईक सम्म गर्न जान्दीन म ।
एक साँझ उसले लेखेको एउटा कवितामा कमेन्ट गरें । धेरै भएको थियो उसको र मेरो फोन, म्यासेज र च्याटमा हुने कुराकानी रोक्कीएको । करिव ६ महिना भएको हुँदो हो । म हरेक दिन हेर्थें उसको स्ट्याटस तै पनि मौन बसेको थिएं । उसको मनले मलाई खोज्यो होला तै पनि उ बेखवर बसिदियो । त्यो दिन उसको कविताले मलाई नै खोजेको थिएन, अरु कसैलाई लेखिएको थियो, प्रेमील कविता तर उसको प्रेम कसैले नबुझिदिंदाको पीडा ।
मैले लेखेको कमेन्ट त्यस्तो खाष थिएन, उसलाई बुझेको भएर उसको मनको बारेमा लेखेको थिएं । कमेण्ट गर्नासाथ उसको म्यासेज मेरो ईन्वक्समा आयो, “मेरा आँखा रसाए आज” । अचानक आएको उसको यो म्यासेजले म पलभरको लागि खुशि भए झैं भए । मेरो कमेण्टले उसका आँखा रसाउनुमा खुशि कहाँ थियो र ? वास्तवमा उसलाई बुझिदिने अरु नहुँदा एउटा कमेण्टको साहारामा उ हाँस्नु रुनु परेको हो ।
त्यो साँझ उसलाई सम्झाउन साह्रै गाह्रो परेको थियो मलाई । फकाईरहेथें उसका गुणहरुको तारिफ गर्दै । सायद उसको मन फक्कीन मानिरहेको थिएन । शब्द शब्दमा आँसु भरेर पठायो उसले । साँच्चै त्यो रातको समय नहुँदो हो त म दौडेर उसलाई भेट्न त्रिभुवन युनिभर्सिटीको पारी पट्टी रहेको उसको कोठामा पुग्थें ।
कुरालाई अन्तै मोड्न भनेको थिएं मैले– “धेरैका कविता लेख्यौ, आजको रात मेरो कविता लेख” । मैले यो भन्नु के थियो मनमा धक्का दिन आईपुग्यो उसको जवाफ– “कविता दुख हो, म तिमीलाई दुखमा लेख्न चाहन्न, कुनै दिन लेख्नेछु तिम्र्रा कविता कलम र मसिले होईन रंगहरुले” ।
यो वाक्य मेरा आँखा रसाउनका लागि पर्याप्त थिए । त्यो रात उ मात्र आईरह्यो सम्झनामा । भेटे वाट आज सम्मका हाम्रा ब्यक्त भएका र नभएका संवादहरु एक एक गरेर आँखा र मन वरपर देखियो । छुट्याउन मुस्कील परिरह्यो मेरो जीन्दगी चाहिने भन्दा छिटो अर्को यात्रामा निस्कीयो या उसको प्रेमको पाईला सर्नुपर्ने भन्दा साह्रै कम गतीमा चल्यो ।
बिस्तारै हामी आक्कल भुक्कल फेसबुकमा भेटीन थाल्यौ फेरी । मुस्कीलले हप्तामा एउटा म्यासेज आउँछ उसको । हतारिंदै खोल्छु खुशि भएर तर कहाँ खुशि हुन दिन्छ र उ ? अस्ती राति ईनवक्समा एउटा म्यासेज आयो उसको प्रश्न थियो उसको – “म मरें भने तिमी रुन्छेउ” ?
धेरैबेर केहि लेख्न सकिन, उ मर्यो भने म के–के गर्छु यो प्लान बनाएर बसेको हुँदो त जवाफ दिन गाह्रो पर्थेन । उ मर्ने कुराको कल्पनाले नै म बहुलाउँछु होला भने उ मर्यो भने के गरुंला ? केहि सोचीन मनले जे बोल्यो त्यहि लेखिदिंए – “कस्तो प्रस्न गर्छौ तिमी तिमी मरेउ भने केहि बेर रोएर फेरी ठिक हुँला म ? एक प्रकारको बहुलाह हुन्छु म ।”
उतावाट आयो – हाहाहाहा
उ किन हाँस्यो, खुशिले ? चित्त बुझ्दो जवाफले ? प्रेमले या पीडाले ? मेरो कल्पनामा उ मदिराको बोटल अगाडी नजर आयो । अचानक यसरी रुवाईदिन्छ उ मलाई । कहिले काहिँ के सुरमा उ म संग रोमान्टीक मुडमा प्र्स्तुत हुन्छ । त्यो बेला म रमाउँछु असाध्यै धेरै, के गर्नु उसको यो रुप हेर्न महिनौं, कुर्नु पर्छ । जीस्कन खोज्छु च्याटमा । २ मिनेट कुरा हुन नपाउँदै उ फेरी थाकेझैं बोल्छ
जस्तो उ – यो रात के छ तिमी र तिम्रो तन्हायीको खवर ?
म – तिमी हौ मेरो तन्हायी
उ– म त आफ्नै तन्हायीसंग बेखवर छु
त्यसपछि उसको म्यासेज लगातार यस्तै आउँछ, “म पागल हुँ , दुखी आत्मा हुँ, तिमीले मेरो कारण पाएको दुखको लागि माफी चाहन्छु, मैले प्रेम गर्न जानिन” आदि आदि ।
हैरान पनि हुन्छु कहिले काहिँ म उ संग । म रिसाएं भने उ बोलीहाल्छ, – “म चाहे जस्तो बहुलाह हुँ, तिमी सुधार्न नसकेपनि माया मारेर हिड्न सक्दीनौ” ।
२ दिन अगाडी उसको म्यासेज आयो रातको १२ बजे । एउटा लाईन, “तिमी मलाई भोली भेट्न आउँछेउ ?”
बिहान ६ बजे पढें मैले, नजीकको मान्छेलाई भेट््न जानु आउनु सामान्य कुरा हो तर उसले आधारातमा मलाई म्यासेज गरेर भोली भेट्न मन गर्नु हामी दुबैको लागि असामान्य कुरा हो । बिहानै किर्तीपुर पुगें म । उ नयाँ कोठमा सरेपछि पहिलो पटक पुगेको थिएं । आजभोली यसरी बन्द कोठमा दुईजना मात्र बस्दा साह्रै अप्ठेरो फिल हुन्छ हामीलाई । के गफ गर्ने ? पढाईको ? जागीरको ? हाम्रो जीन्दगीको ? प्रेमको ? मौन मौन उसले गीत गुनगुनाउँदै खाना बनाएको हेरेर बस्छु म । यो पनि भन्न मन लाग्दैन किन बोलाको मलाई । उ कहाँ भन्छ र भेटेको बेला “तिम्रो यादले सताएर बोलाएको” भनेर । हाँस्दै भनिदिन्छ – तिमीलाई खाना खुवाउन बोलाएको हुँ ।
उसोत म फोन र म्यासेजमा उसलाई जति हप्काउन र गाली गर्न सक्छु त्यति उसको अगाडी बोल्न सक्दीन । यस्तो बेलामा हाम्रा गफ नयाँ निस्केका किताव, उसका कविता र छिटफुट भै रहेकी प्रेकीकामा केन्द्रीत हुन्छ । उसको र मेरो प्रेम एउटा गन्तव्य नै नभएको दिसा तर्फ बढिरहेछ बर्सौदेखी ।
यो बिचमा मेरो जीन्दगीमा धेरै थरी परिवर्तन आएपनि उसमा खाष परिवर्तन देखेको छैन । परिवर्तन हुन्छन् त उसका प्रेमिकाहरु । उसले आफ्््नी प्रेमिकाको बारेमा सुनाउँदा म त्यति उत्साहित पनि हुन्न र त्यति उदास पनि । आज सम्म मैले उसका कुनै पनि प्रेमिकाको नाम थर सोधेको छैन । उ कहाँ बस्छे, के गर्छे, कस्ती छ आदि कुनै कुरा सोध्दीन म । ति केटीहरुको तस्वीर पनि हेर्न मन लाग्दैन मलाई । इस्र्या ,रिस त्यस्तो कुनै कारण होईन । किनकी म बुझ्छु उ यी केटीहरुसंग कुनै न कुनै कुरामा असन्तुष्ट छ । मनले रहर गर्छ कुनै दिन उ खुशि हुँदै आफ्नी प्रेमीकाको तस्वीर मलाई देखाओस् अनि म बल्ल सोधुँला त्यो केटीको बारेमा । तर यो उवाट कैलेहि भएन ।
मान्छेहरु भन्छन् संसारमा उस्तै अनुहार र स्वभाव भएका ७ जना जन्मेका हुन्छन् रे । म बाहेक पनि ६ वटी म जस्तै केटी यो दुनियामा कतै होलान् । ति मध्य एउटी फेला परे पनि हुन्थ्यो नी । त्यो केटी मेरै आनीबानी, स्वभाव र बिचारकी हुन्छे म यो केटालाई त्यहि केटीसंग बिबाह गरिदिन्थें, यस्तो कुरा पनि खेल्छ मेरो मनमा ।
म मौन भएपछि उ थाकेको स्वरमा भन्छ – “बोलन तिमी बोल्यौ भने म हल्का हुन्छु” । उ किन भन्छ यो । जुन सुनेर म भासिन्छु आफ्नै मनको पहिरोले । फेरी सुनाउँछ, “आफ्ना कुरा पटक्कै नसुनाएर अरुकै कुरा मात्र सुन्दा पनि मन हलुंगो हुन्छ भने त्यो तिमी हौ । तिमी बोलिरहन्छेउ, मेरो भारी मन बिस्तारै हलुका हुँदै जान्छ र तिम्रो कुरा सक्कीदाँ पंक्षी जस्तै हुन्छु म, उड्दै गरेको चंगा जस्तै, कपास जस्तै हुन्छु ।”
आफ्नै मनले मात्र सुन्न सक्ने गरि बोल्छु । तिमी किन बोझ बोकेर हिँडीरहेको छौ ह ?
जव म यो कुरा मनबाट निकालेर ओठमा ल्याउँछु र उसको पीर र प्रेमले बिथोलेको कुरा सुनाउँछु, मेरा रात उसको सकसले असजीलो गरि कटेका बातहरु बोल्न थाल्छु र गुनासो गर्छु ,रोउँलाझैं गरी किन यस्तो बेथीतीको बनाएको छौ आफुलाई ?
तिम्ले यसो गर्दा ममा के बित्छ सोच्दैनौ तिमी । कमसेकम मेरो खुशिको लागि त एउटा ढंगको मान्छे बनिदेउ, तिमी त बहुलाएर मनपरि गरिरहेछौ, तिम्लाई यसले शान्ति पनि दिंदो हो कुनै बेला । म त अझैं सद्धेनै छु तिमीले यो सब गर्दा मलाई पीडा हुन्छ भन्ने राम्रो संग थाहा छ तिमीलाई र पनि किन गरिहेछौ हँ यो सव ? मैले जे गरेपनि उसले सहनै पर्छ, र सहन्छे भनेर तिमी यो सव गरिरहेको छौ नि है ? अरुमा म खोजेर कहाँ भेटिन्छ ? जो केटी तिम्री प्रेमिका बनेर आउँछे उसमा म नखोज । किनकी उ उ नै हो म होईन । हैरान बनाएको छौ तिमीले मलाई, सताएको छौ । जुन कुरा कैल्यही पुग्दैन त्यही कुराको चाहनामा गतिलो जीन्दगी बबार्द किन गरिरहेछौ ?
मैले अरु कुरा भन्न बाँकी हुँदैमा उ बोल्छ – “प्लीज अव अरु नसुनाउ म सुन्न सक्दीन” । त्यो बेला उसको आँखामा प्रेमको सागर देखीन्छ, देख्न मिल्दो हो त मुटुमा पनि आगो लागेको छ होला ।
अरु त आउँछन् जान्छन् उसको जीन्दगीमा म त संधै छु, देखिरहेको छु र उसका आँसु रोएको पनि छु । दुरी जति लामो जस्तो देखिएपनि उसको पीडालाई एउटा फेसबुककै स्ट्याटसबाट महसुस गर्ने म उसको मन संग कती नजीक हुँला ? उसले पनि खोजेको हो भुल्न, कोशिष गरेको होला कतिपटक अब म टाढिन्छु भनेर तर खै र यो प्र्रेमको अन्त्य आफ्नै मनले गरेको कोशिषले भएन भने समयले अन्त्य गर्न सक्ला ?
कस्तो थियो उ कस्तो भएर निस्कीयो । दिन, महिना, र बर्षहरुले उसलाई जीम्मेवार बनाउँला भन्ने सोचेको थिएं, तर उसको मनका बोझहरु यसरी थपींदै गयो की आज उ आफ््नो शरिर र जीवन धान्न डीप्रेशनका गोलीहरु निल्छ ।
आजकल जव उसका उदास म्यासेज मेरो ईन्वक्समा आउँछ– उ निदाउन नसकेको कुरा लेख्छ, र भन्छ “के ठेगान यो दुखी आत्माका”े । मेरा रात फेरी कस्टकर बन्छन् ।
अनेक कुरा सोच्छ मनले कतै उसले आत्महत्या पो गरिसक्यो की ? उसलाई भेट्न पुग्दा उसको लास झुण्डीरहेको पो देख्नु पर्छ की ? या त उ थला परेर उठ्नै नसक्ने पो भएको हेर्नु पर्छ की । साँच्चै हिजोको दिनमा मलाई उ जति जीन्दगी र प्रेमका कुराले दुखी भएपनि मर्दैन जस्तो लाग्थ्यो । खै कीन हो आजकाल धेरै दिन भयो मेरो मन रातहरुमा साह्र्रै अतालिन्छ । उसको सुन्यताले निम्त्याउन सक्ने अप्रीय घटनाको त्रासले म आधारात सम्म अनलाईन हुन्छु, । उसले “ल अव म सुत्छु तिमी पनि सुत” नभने सम्म अफलाईन नै हुँदीन म । कैले प्रेम बनेर कैले याद बनेर कैले त्रास बनेर उ मलाई यसरीनै सताईरहन्छ रातहरुमा ।
सुलेको बानी- पेशल आचार्य
सन्तान सुख– राजन पनेरू
परदेशीका श्रीमतीको न्यानो ओछ्यानले बदलेको मेरो भाग्य
जुम्से कवि- माधव सयपत्री
डाक्टर (लघु कथा )
विश्वास ( लघुकथा )
निमोठिएको खुसी (कथा)
फेसबुके नेपाली साहित्य–सक्किगोनी !–मनु ब्राजाकी